सुनसरी उवासंघ निर्वाचन, जातिय भोटले रोक्न सक्ला त सापकोटालाई ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
सुनसरी उवासंघ निर्वाचन, जातिय भोटले रोक्न सक्ला त सापकोटालाई !
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको आउँदो २७ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको सरगर्मीले धरान बजार तातिएको छ । विशेष गरी यस पटक केहि नयाँ र धेरै पुराना अनुहार विचको प्रतिष्पर्धाले बजार तातिएको हो ।
सुनसरी उवासंघको नेतृत्व हत्याउन स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै कांग्रेस नेकपा विच भिडन्त सुनिश्चित भएको छ । यी दुवैले बाहिर खुलेर आकांक्षीलाई नबोकेपनि भित्रभित्रै सहयोग गरिरहेका छन् ।
उवासंघको निर्वाचनमा यस पटक नेकपा प्यानलबाट गिरीधारी सापकोटा अध्यक्षमा लड्दैछन् भने, कांग्रेसको कोटाबाट विजय श्रेष्ठ छन् । गिरीधारी सापकोटालाई पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी तथा सत्तारुढ साना दल समेतको साथ रहेको छ । यता नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाएका विजय श्रेष्ठलाई कांग्रेसको साथ छ ।
उनी साना दलका उद्योगी ब्यापारी रिजाउन लागि परेका छन् । यसका अलावा श्रेष्ठलाई धरानका नेवार समुदायको पनि साथ छ । नेकपाका कतिपय भोटर्सले जातियताका आधारमा श्रेष्ठलाई भोट हाल्ने देखिन्छ ।
श्रेष्ठलाई सापकोटाको लोकप्रियतालाई रोक्न त्यत्ति सजिलो भने छैन । धरानका नेवारी समुदायका ब्यापारी तथा संघका पूर्वअध्यक्षहरुले समेत सापकोटालाई खुलेरै समर्थन गरेकाले पनि श्रेष्ठको ‘दाँतमा ढुंङ्गा’ लागेको छ । सापकोटाको समर्थनमा पूर्वअध्यक्ष अशोक ताम्राकार, विजय डाँगा, पवनकुमार अग्रवाल, गौरिशंकर अग्रवाल, मोहनकाजी शाक्य, सरोज श्रेष्ठ लगायतको साथ छ ।
‘साना उद्योगी ब्यापारीको समर्थनमा श्रेष्ठ कहिल्लै आएनन्, उवासंघमा रहँदा पनि यिनले हाम्रा समस्या समाधान गर्न चासो देखाएनन् ।’ धरान महेन्द्रपथका कपडा ब्यापारी भन्छन्–‘दिन दहाडै बजारमा ब्यापारीमाथि हातपात हुँदा आँखा चिम्लेर बस्नेलाई पुनः संस्थामा लगिँदैन ।’ उनले भने ।
साना ब्यापारीहरुको चाहना हेर्दा सापकोटाको जीत सुनिश्चित छ । उवासंघको बर्तमान कार्यसमितिमा द्वितिय उपाध्यक्ष रहेका सापकोटा मात्र यस्ता ब्यक्ति हुन जो कार्यसमितिले गरेका गलत कृयाकलापमा समेत एक्लै काउन्टर दिन्थे ।
‘उद्योगी ब्यापारीका पक्षमा सडक देखि प्रहरी प्रशासन र हरेक निकायमा उभिने गिरिधारी नै हुन्, यसपटक साना ब्यापारीहरुको सबै भोट उनैलाई जान्छ ।’ धरान मनिहारी तथा उपहार ब्यापार संघमा समेत रहेका एक ब्यापारी भन्छन् । उनी दुई दशकदेखि उवासंघमा सक्रिय छन् ।
धरानको राजनीति सदैव जातियताबाट प्रभावित हुन्छ । चाहे पार्टीगत होस चाहे कुनै संस्थामा नै किन नहोस् । यहाँ जसको बाहुल्यता छ संभवतः त्यसैले पकट जमाएको इतिहास छ ।
बर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र शाहको पालाको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने, उनी तीन पटक पराजित भएर जितेका हुन् । माडवारी र मधेशी र जनजाति समुदायको साथ पाएर उवासंघमा आउन उनलाई चार पटक चुनाब लड्नु पर्यो ।
उवासंघमा तीन पटक ‘नेवारिज्म’ हावी हुँदा शाहले पराजयको ह्याट्रिक नै गरे । चौथो पल्ट शाहले निर्वाचन जित्नकै लागि करोडौं सिध्याएका थिए । रक्सी र मासुको खोलो बगाएका थिए । शाह अगाडी सरोज श्रेष्ठ, मोहनकाजी शाक्य, अशोक ताम्राकार अध्यक्ष थिए ।
सापकोटाले धरानका नेवारी समुदायलाई मात्र विस्वास गर्दा धोका नहोला भन्न सकिन्न । पार्टीगत रुपमा फरक पार्टीबाट उठेपनि मनोज श्रेष्ठलाई जातियताको विराशत छ । बाहिर सापकोटालाई काँध थाप्नेहरुले नै मतदानमा धोका नदेलान् भन्न सकिन्न । यसर्थ, सापकोटाले धरानका माडवारी र मधेशी समुदायका उद्योगी ब्यापारीलाई पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
माडवारीको भोट कता ?
उवासंघ सुनसरीमा ‘नेवारिज्म’ हावी भइरहेको अवस्थामा माडवारी समुदायको उपस्थितिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । गएको निर्वाचनमा नेवारी समुदाय विभाजित भएको थियो । कृष्णकुमार अग्रवाल र राजेन्द्र शाहविचको भिडन्तमा नेवारी समुदायको भोट बाँडियो । अन्तमा, माडवारी समुदायको भोट नै शाहलाई निर्णायक भयो ।
सुनसरी उवासंघमा करिब ५० प्रतिशत माडवारी, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको उपस्थिति रहेको छ । यस अवस्थामा मनोज श्रेष्ठको पक्षमा नेवारी भोट विभाजित भए सापकोटालाई फाइदा पुग्छ । त्यसो भन्दैमा उनले माडवारी र मधेशी समुदायलाई हातमा नलिए झिनै मतान्तरले भएपनि पराजय नहोला भन्न सकिन्न ।
तर, सापकोटा धरानका यस्ता ब्यक्ति हुन जो दुई दशक उवासंघमा रहेर निर्वाचनमा लडिरहँदा सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेद्वारमा गनिन्छन् । उनको लोकप्रियता नेवारी समुदायमा मात्र हैन, जनजाति, माडवारी र मधेशी समुदायमा पनि छ ।
कूल १ हजार ७ सय ४८ मतदाता मध्ये वाणिज्य तर्फ १ हजार ५५, उद्योग तर्फ ५९४, एशोशिएट तर्फ ८३ र वस्तुगत तर्फ १६ भोट रहेको छ । जसमा निर्वाचनबाट वस्तुगत खुल्लाबाट ८ जना र महिला कोटाबाट १ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
उद्योगबाट ४ खुल्ला र १ जना महिला निर्वाचित हुनेछन् । एशोशिएटबाट ३ जना निर्वाचित हुन्छन् । वस्तुगत तर्फ शिवराज श्रेष्ठ, रामश्वरुप शर्मा सर्वसम्मत भइसकेका छन् । भने, वस्तुगत महिला सदस्यमा एलिना मगर सर्वसम्मत भइसकेका छन् ।
निर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले ४ जना सदस्य मनोनित गर्नेछ भने सदस्यहरुमध्येबाटै प्रथम उपाध्यक्ष, द्धितिय उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षसहित उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव र प्रचार सचिवको रुपमा पदीय जिम्मेवारी तोक्ने ब्यवस्था छ ।